आलुमा ऐँजेरू लागेपछि किसान चिन्तित
लाप्राक (गोरखा), वैशाख २४ गते । कुनै एक समय थियो, लाप्राकमा आलु साट्न तल्लो क्षेत्रका मानिस भरिया लगाएर चालम लिएर जान्थे । अहिले त्यही ठाउँमा आफूले खाने आलुसमेत उत्पादन हुन छोडेको भन्दै स्थानीय गुनासो गरेका छन् ।
यहाँको आलुमा ऐँजेरु लागेर सखाप पा¥यो, आलु फल्नै छाड्यो, लाप्राकका अगुवा कृषक दुलाल गुरुङले भन्नुभयो, मान्छेमा लाग्ने एड्स रोगभन्दा खतरा हुँदोरहेछ आलुमा लाग्ने ऐँजेरु ।
आलुको दानामा मानिसको शरीरमा मुसा आए जस्तो समस्या देखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । तीन÷चार वर्षदेखि ऐँजेरु देखिन थालेको गुरुङले बताउनुभयो ।
कुनै समय लाप्राकको आलु भन्ने बित्तिकै किन्नेहरूको तँछाड मछाड हुन्थ्यो । एक पटक त्यहाँको आलु खाएका आलुका पारखी धेरैको जिब्रोमा अहिले पनि त्यसको स्वाद गडिरहेको छ । त्यहाँ स्थानीय त झन् आलु नै मात्र खाएर गुजारा चलाउथे ।
लाप्राकको मुख्य खेतीबाली रहेको आलु अहिले सङ्कटमा परेको छ । हामी त उसिनेर पनि त्यही आलु खान्थ्यौँ, आलुकै ढिडो ओडालेर खाइन्थ्यो, अहिले तरकारी खाने आलुसमेत फल्न छोड्यो, गुरुङले भन्नुभयो ।
लाप्राकका स्थानीयहरू अझ पनि आलु खाएरै गुजारा चलाउँछन् । त्यहाँको मुख्य बाली एवं खाद्यान्नको प्रमुख स्रोत परम्परागत आलु, विस्तारै लोप हुन थालेको भन्दै उनीहरू चिन्तित भएका छन् । हाम्रो खेत छैन, धान खेती हुँदैन, आलु उत्पादन नभएपछि खाने कुरा पनि हुँदैन, अब के खाएर बाच्ने ? सोही ठाउँका स्थानीय भक्तबहादुर गुरुङले भन्नुभयो ।
आलुमा उक्त समस्या देखिएपछि जिल्ला कृषि विकास कार्यालयलाई पनि खबर गरेको तर त्यहाँ गएका कृषि प्राविधिकले अहिले खेती गरेको स्थानमा आलु नलगाउन सुझाव दिएको अगुवा कृषक दुलाल गुरुङले बताउनुभयो, कृषिबाट सर आउनु भाथ्यो, यो ठाउँमा सात वर्ष आलु नलगाउनु भन्नुभा छ, आलु नरोपे के खाने ? उहाँले भन्नुभयो ।
स्थानीय जातको आलुमा ऐँजेरु नामको रोग लागेपछि अहिले त्यहाँ आलुको उत्पादन स्वात्तै घटेको उनीहरूको भनाइ छ तर जिल्ला कृषि विकास कार्यालय उक्त कुराबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । त्यहाँ ऐँजेरुको समस्या छ भनेर अहिलेसम्म एक जना किसानले पनि कार्यालयलाई जानकारी गराउनुभएको छैन्, जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख यामकुमार श्रेष्ठले भन्नुभयो, हामीले लाप्राकलाई आलुको पटक क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी पो गरिरहेका छौँ ।
ऐँजेरु लागेको भए, त्यहाँको आलु नष्ट गरी अर्को ठाउँबाट बीउ लगेर खेती गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसबारेमा अध्ययन गर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ । हाम्रा साथीहरू त्यहीँ हुनुहुन्छ, कस्तो समस्या रहेछ अध्ययन गर्न लगाउँछु, अनि वास्तविकता पत्ता लाग्ला, उहाँले भन्नुभयो ।
ऐँजेरुको समस्या प्रमाणित भए त्यहाँको आलु अयन्त्र लैजान प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख श्रेष्ठले बताउनुभयो ।